धितोपत्र बजारः साढे चार अर्बको कारोवार | Ratopati
धितोपत्र बजारः साढे चार अर्बको कारोवार
personरासस exploreकाठमाडौं access_timeफागुन १५, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च वृद्धि हुनेक्रम आज पनि जारी रह्यो । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक ३६.०५ अङ्कले बढेर एक हजार ६३२.१७ मा पुुगेर रोकियो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ११.६३ अङ्कले बढेर ३४७.६८ मा पुुगेको छ । जुन प्रतिशतका आधारमा ३.४६ हो ।
नेप्सेमा भारी वृद्धि हुँदा कारोवार रकम झण्डै साढे चार अर्ब पुुगेको छ । आज कूल १८० कम्पनीका एक करोड आठ लाख ५९ हजार ६५६ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ४६ करोड पाँच लाख ३६ हजार २५१ मा खरिद बिक्री भयो ।
नेप्सेमा भारी वृद्धि हुँदा कारोवार भएका कूल १२ मध्ये तीन उपसमूहको शेयर मात्र उकालो लागेको छ । बैंकिङ ८३.२९ अङ्कले बढ्दा विकास बैंक ३८.६५ र उत्पादन उपसमूहको शेयर १६.४५ अंकले बढेको छ । व्यापार ४८.४३, होटल २७.६२, जलविद्युत् २१.५, वित्त ८.५२, निर्जीवन बीमा २१३.३९, अन्य २२.५३, लघुवित्त ५६.३५, जीवन बीमा १६४.६३ र सामूहिक लगानी कोषको ०.१६ अङ्कले घट्यो ।
कारोवार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रह्यो । सो कम्पनीको शेयर रु २८ करोड ९२ लाख ३७ हजार २८३ मा खरिद बिक्री भयो । यस्तै एनआइसी एशिया बैंकको रु २० करोड ५९ लाख ४६ हजार ५०५, एनएमबी बैंकको रु १५ करोड ७० लाख ६१ हजार २३८, नवील बैंकको रु १५ करोड ३० लाख ६७ हजार ५७८, शिवम् सिमेन्टको रु १४ करोड ८९ लाख ६७ हजार ८७ र प्रभु बैंकको शेयर रु ११ करोड ८३ लाख १७ हजार ८९० मा खरिद बिक्री भयो ।
आज सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकका शेयरधनीले १० प्रतिशतले कमाए । यस्तै नेपाल एसविआइ बैंकका ९.९४, हिमालन बैंकको ९.९२, नवील बैंकको ९.७७, वमि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ९.३१, स्टाण्र्डड चार्टड बैंकको ८.७० र एनआइसी एशिया बैंकका लगानीकर्ताले ८.२० प्रतिशतले कमाए ।
परिसूचक बढे पनि आज सबैभन्दा बढी नाग्दी ग्रुप पावरका शेयरधनीले ६.७१ प्रतिशतले गुमाए । सिनर्जी पावर ६.५०, समृद्धि फाइनान्स ६.१९, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन ४.९९, युनाइटेड इन्स्योरेन्स ४.८५ र नेपाल सेवा लघुवत्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ४.८१ प्रतिशतले गुमाए ।
कोरोनाभाइरसको असरसँग जुध्न युएईद्वारा ७० अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा
आज बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको विनिमयदर कति ?
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तीन जनाको नाम सिफारिस
कोरानाः विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गर्‍यो पछिल्लो विवरण, यस्तो छ बढी प्रभावित ३४ देशको तथ्यांक
‘डा. भगवान कोइरालाले नै काम चलाउ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेपछि पीपीई निर्माण सुरु गरेँ’
डाटा सेक्युरिटीका बारेमा नेपाल इ–गभर्नेन्स सोसाइटीको ध्यानाकर्षण
लकडाउनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन चैत मसान्तमा नआउने
भानुआतुमा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा
लकडाउनमा बिजुली, पानी र टेलिफोनमा राहत दिन प्रदेश सांसदको माग
युएईमा थप ३ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण, संक्रमित नेपालीको संख्या ११ पुग्यो
कोरोनाविरुद्ध लड्न प्रदेश सरकारलाई काँग्रेसको ४० लाख सहयोग